MS Word , Excel , Powerpoint , Access , Front Page , Adobe Acrobat , PageMaker တို့ကို မြန်မာလို လေ့လာရအောင် - Page4- မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
MS Word , Excel , Powerpoint , Access , Front Page , Adobe Acrobat , PageMaker တို့ကို မြန်မာလို လေ့လာရအောင်
ပြန်စာ - MS Word , Excel , Powerpoint , Access , Front Page , Adobe Acrobat , PageMaker တို့ကို မြန်မာလိုေƜ
အကိုရေ အကိုပြောတဲ့ ၁၂ တော့မတွေ့ ပါဘူး ကျွန်တော်တွေ့ တာလေးနဲ့ ဖိုရမ်မှာရှိတာလေးတွေကိုတင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ။
Corel Draw ( မြန်မာလို) ကိုညီမင်းဆိုက်မှ
CorelDraw Ebooks & Training Video
CorelDraw Graphic e-books and tutorials
$ညိုမင်းလွင်$, မောင်သံသရာ, bagothar85, fairywin, lokasara, Lwin Thu, phyomyintthein, PyaitSone, zo
Corel Draw 12 မြန်မာလိုသင်ခန်းစာ စာအုပ်လေးများရှိရင် ကူညီကြပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော်တို့က နယ်မြို့ကဆိုတော့ အရမ်းခက်ခဲနေလို့ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ အောင်သုခ အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
PowerPoint 2010 လိုချင်လို့ပါဆို ဟီးဟီး 2007 ဟုတ်ဘူး ဟီးဟီး ငိုလိုက်မှာနော်
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ kyarminthar အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
စတိုးဆိုင်ကြီးတွေမှာသုံးကြတဲ့ စာရင်းဇယားတွေကို ထည့်သွင်းတဲ့ software နဲ့ စာအုပ်လေးများရှိရင်ကူညီကြပါခင်ဗျာ excel နဲ့ထည့်တာအဆင်မပြေလို့ပါခင်ဗျ
တင်ရင်ကောင်းမလား၊ မတင်ပဲနေရင် ကောင်းမလား စဉ်းစားနေတာ။
LibreOffice Calc documentation ကို ဖတ်ရင်း notes ထုတ်ထားတာပါ။
အကုန်လုံးတော့ မပါဘူး။ ကိုယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ အကြောင်း နည်းနည်းပါပဲ။
ရေးပုံကလဲ ကိုယ်နားလည်ရင် ပြီးရော ဆိုပြီး ရေးထားတာ။
စိတ်ဝင်စားရင် ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။ ဆရာဇော်လင်းထက် သာတာဆိုလို့ free တစ်ခုပဲ ရှိတယ်
$ညိုမင်းလွင်$, မိုးလွင်, မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, fairywin, goldstar, minthike, putty, tu tu, zo
18-01-2012, 01:48 PM
ပို့စ် 12 ခုအတွက် 16 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
word 2007 ဒေါင်းရတာအဆင်မပြေလို့ပါ ...................ကူညီကြပါဦး
Find More Posts by shinthantnyein
18-01-2012, 01:52 PM
word 2007 စာအုပ် ဒေါင်းလို့မရလို့ ကူညီပါရှင်...........................................................................................................................................
18-01-2012, 02:58 PM
အမရေ ကျွန်တော်စစ်ကြည့်တော့လင့်တွေကကောင်းပါသေးတယ် ပြန်လုပ်ကြည့်ပါနော် ကွန်နရှင်မကောင်းတာနေမှာပါ။
Microsoft word 2007 မြန်မာလို
မောင်သံသရာ, fairywin, g00gle, Lwin Thu, minthike, zo
ဒီလိုမျိုးပညာပေးဗဟုသုတစာအုပ်တွေများများလေးတင်ပေးပါနော်။ခုလိုတင်ပေးတဲ. မြန်မာဖိုရမ်မိသားစုကိုလည်းအထူးကေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။နောကင်နောင်လည်းများများလေးခုလိုစာအုပ်မျိုးတွေတင်ပေးပါနော်။ပြီးတော.ကုမ်ပဏီသုံး၊ရုံးသုံးစာရွက်စာတမ်း ပုံစံလေးတွေနဲ.ဆိုင်တဲ.စာအုပ်တွေလည်းထပ်ပြီးတင်ပြပေးပါနော်။ကျေးဇူးပါပဲ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ htayhtay1177 အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by htayhtay1177
ဖိုရမ်မှ အစ်ကိုအစ်မတို့ခင်ဗျား ဘယ်နေရာကနေ အကူအညီတောင်းရမယ်မသိလို့ ဒီနေရာကနေပဲ ကူညီပေးပါလို့ မေတ္တာရပ်ခံပါတယ် ခင်ဗျာ။ myob နဲ့ပတ်သတ်ပြီး မြန်မာလိုရေးထားတဲ့ စာရင်းဇယားရေးသွင်းနည်းစာအုပ်လေးများရှိရင်ဝေမျှပေးကြပါအုံးလို့ အကူအညီတောင်းလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်နေမှာပါခင်ဗျာ။ စောင့်မျှော်နေပါ့မယ်ခင်ဗျာ။
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ zawthant အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
lay pyay nyin
ပို့စ်2ခုအတွက်6ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
လေပြေလည်း.. ဖိုရမ်က အစ်ကို အစ်မ မောင် ညီမလေးတွေကို အကူအညီတောင်းပါရစေနော်... Microsoft Office Access 2007 မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးလိုချင်ပါတယ်ရှင်.... ဒါမှမဟုတ် မသိတာတွေ မေးချင်ပါတယ်.. Access 2007 ကို လေ့လာနေလို့ပါ... အဲဒါ ဒီနေ၇ာမှာပဲ မေးရမှာလားရှင့်....
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ lay pyay nyin အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, Lwin Thu
lay pyay nyin ထံသို့စာချွန်လွှာပို့ရန်
Find More Posts by lay pyay nyin
လေပြေလည်း.. ဖိုရမ်က အစ်ကို အစ်မ မောင် ညီမလေးတွေကို အကူအညီတောင်းပါရစေနော်... Microsoft Office Access 2007 မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာအုပ်လေးလိုချင်ပါတယ်ရှင်
Microsoft office Access 2007 စာအုပ်ကို ဒီလင့်မှာ တွေ့မိပါတယ် သူနဲ့ဆပ်စပ်ပြီး တခြား 2007 version လေးတွေလဲ ပါ ပါတယ် ခင်ဗျာ အဆင်ပြေပါစေ
အောက်ပါအသင်းဝင်9ဦးတို့မှ မြန်အောင်သား အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
မောင်သံသရာ, မောင်ပေါ်ဦး, bagothar85, lay pyay nyin, Lwin Thu, minthike, seamonkey, zo, zoard
အမရေ အောက်ကလင်လေ့းမှာ အကိုတစ်ယောက်ဖြေပေးထားတာရှိပါတယ်အဆင်ပြေပါစေ မေးချင်တာလဲမေးလို့ရပါတယ်။ အဆင်ပြေပါစေ။
ကို putty ညွှန်ထားတာလေးပါ
မောင်သံသရာ, မြန်အောင်သား, bagothar85, lay pyay nyin, Lwin Thu, minthike, seamonkey, zo
ကိုသူရိန်ရှင့် တခြားလင့်များရှိရင် ထပ်ပေးပါ ။ ဆွဲလို့မရပါသဖြင့်
ကိုသူရိန်ရှင့် Access 2007 လိုချင်ပါသည် ကျေးဇူးပြုပြီးတင်ပေးပါ
အောက်ပါအသင်းဝင်မှ စပယ်မေလေး အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by စပယ်မေလေး
Switchboard နဲ့ရေးပြီးပိတ်ထားတဲ့ ဖိုင်တွေကို ဘယ်လိုပြန်ဖော်၇မလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်..
နောက်တစ်ခုက .. switchboard မှာ နောက်ခံပုံထည့်တာ ပုံက အ၇မ်းကြီးနေပါတယ်.. ပုံရဲ့ resolution များနေလို့ပါ.. အဲဒါ form နဲ့ fit ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်၇င်၇မလဲ သိချင်ပါတယ်ရှင့်..
မောင်သံသရာ, pannuko, zo
21-03-2012, 03:22 PM
ဒီမှာတင်ထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို မဒေါင်းပဲနဲ့ ဖတ်ချင်လို့ ရပါလားရှင် ဖြေပေးပါနော်..
21-03-2012, 03:34 PM
အမရေ အောက်ကလင့်လေးမှာလေ့လာပေးပါ mediafire နဲ့ လင့်ရဲ့နောက်မှာ .Pdf ဆိုတာပါရင်တော့ အောက်နည်းလေးနဲ့ ကြည့်လုိ့ရပါတယ် အဆင်ပြေပါစေ..........
PDF ဖိုင်များအတွက် Online reader ပြုလုပ်ခြင်း
ဇေကြီး, g00gle, zo
ပြန်စာ - Microsoft Office 2007
Access 2007တော့ကျွန်တော်လည်းမတွေ့ ဘူး။ Access 2010တော့
ဇေကြီး, မောင်ပေါ်ဦး, g00gle, zo
အသင်းဝင်နေ့စွဲ: Oct 2014
ဖိုင်တွေက ဖြည်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ် အကိုရေ.. နည်းလမ်းလေးရှာပေးပါဦး
အောက်ပါအသင်းဝင်2ဦးတို့မှ Tracklink အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Find More Posts by Tracklink
16-10-2014, 06:27 AM
Originally Posted by Tracklink
အကိုရေ ကျနေ်ာ လုပ်ကြည့်တာတော့ရတယ်ဗျ.
mediafire ကနေတင်ပေးထားတာကို ဒေါင်းပြီးလုပ်ကြည့်တာရတယ်ဗျ။
ဖြည်တဲ့ခါကျရင် password တောင်းပါလိမ့်မယ်။ www.myanmarfamily.org လို. ရိုက်ထည့်ပေးရင် ရပါပြီအကို။
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ zo အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
Lwin Thu, powerlight02, tu tu
adobe ebooks, applications ebooks, excel, libreoffice, microsoft office ebooks, mm computer ebooks
Photoshop ကို မြန်မာလိုလေ့လာလိုသူများအတွက်.. leostar81 E-books များ 121 30-08-2012 06:59 PM
Microsoft Office 2010 rfanquee Applications 10 19-01-2010 11:11 AM